Uxanduva kwezentlalo -I-NBC yeTekhnoloji yeTekhnoloji yaseKhompyuter, Ltd.
> Ukuqinisekisa impilo nentlalontle yomqeshwa.
> ukwenza ithuba elongezelelekileyo lokuba abasebenzi babone amandla abo.
> ukuphucula ukonwaba komqeshwa
I-HOUD (NBC) ithathela ingqalelo imfundo yokuziphatha komqeshwa kunye nokuthotyelwa, kunye nempilo yabo kunye nentlalontle, ibonelela ngendawo efanelekileyo yokusebenza kunye nomoya oqinisekileyo wokuqinisekisa ukuba abantu abasebenza nzima banokufumana umvuzo ngokufanelekileyo. Ngokuqhubeka kwenkqubela phambili yenkampani, sinika ingqalelo kwinkqubo yophuhliso lomsebenzi, senze ithuba elingakumbi lokuba baqonde ixabiso labo, iphupha labo.
Ukuthobela umthetho karhulumente, sibonelela ukuba umvuzo awuyi kuba ngaphantsi komyinge osisiseko wemivuzo karhulumente, kwaye kwangaxeshanye, ubume bemivuzo yokhuphiswano buya kumiliselwa.
I-HOUD (NBC) ilungiselele inkqubo yokhuseleko lwabasebenzi ebandakanyayo, ukuthobela umthetho kunye nokuziphatha kwabaqeshwa kuyakhuthazwa. Ukuphucula iinzame zomsebenzi kunye nobuchule bokuyila, inkqubo yenkuthazo njengamabhaso ezemali, amabhaso olawulo kunye nebhaso elikhethekileyo lokunikezelwa kwamiselwa. Kwaye kwangaxeshanye sineembasa zonyaka "njengolawulo lophononongo
- Ukhathalelo lwempilo
I-OT kufuneka isekwe ngokuzithandela emsebenzini, wonke umntu kufuneka abe nosuku lokuphumla ngeveki. Ukulungiselela incopho yemveliso, inkqubo yoqeqesho emnqamlezweni iya kuqinisekisa ukuba umqeshwa angaphendula kweminye imisebenzi. Kuxinzelelo lomsebenzi, kwi-HOUD-NBC）, iisuphavayiza zacelwa ukuba zikhathalele impilo yomzimba neyengqondo yomntu, zilungelelanise imisebenzi ngamanye amaxesha ukuphucula unxibelelwano oluphezulu, ukulungiselela imisebenzi yokwakha amaqela ukuphucula imeko yeqela, ukwandisa ukuqonda kunye nokuthembana nokubumbana kweqela .
Uvavanyo olungenasimahla lomzimba luyanikezelwa, ingxaki yezempilo esekwe iya kulandelwa kwaye isikhokelo siya kuboniswa.
> Phumeza iqhinga "lokhuseleko, lokusingqongileyo, elithembekileyo, lokonga umbane".
> Yenza iimveliso zokusingqongileyo.
> Ukwenza ukonga umbane kunye nokunciphisa ukungcola ukuphendula utshintsho lwemozulu.
I-HOUD (NBC) ihlawule ingqalelo ebanzi kwiimfuno zokusingqongileyo, isetyenziswe ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo amandla ethu, izixhobo ukunciphisa iindleko zethu kunye nokuphucula izibonelelo zokusingqongileyo. Ukuqhubeka ngokunciphisa ifuthe elibi lokusingqongileyo ngokwenziwa kwezinto ezintsha ukutyhala uphuhliso lwekhabhoni esezantsi.
Ulondolozo lwamandla kunye nokunciphisa ukukhutshwa
Ukusetyenziswa kwamandla okuphambili kwi-HOUD (NBC): Imveliso kunye nokusetyenziswa kwamandla okuhlala, ukusetyenziswa kwe-LPG yokuhlala, ioyile yedizili.
Ungcoliseko lwamanzi oluphambili: ilindle lasekhaya
- Ingxolo ungcoliseko
Ungcoliseko lwengxolo oluphambili luvela kwi: isiguquli somoya, isilayida.
Kubandakanywa inkunkuma enokuphinda isetyenziswe, inkunkuma eyingozi kunye nenkunkuma eqhelekileyo. Ikakhulu: amasuntswana angaqhelekanga, iimveliso ezingaphumelelanga, izixhobo ezilahliweyo / ikhonteyina / izinto, izinto zokupakisha inkunkuma, izinto zokubhala inkunkuma, iphepha lenkunkuma / izinto zokuthambisa / ilaphu / ukukhanya / ibhetri, inkunkuma yasekhaya.
I-HOUD (NBC) inyanzelisa ukuqhelaniswa nabathengi, ngonxibelelwano olukude ukuqonda ukuqonda okulindelweyo kwabathengi, ngokuzimisela ukuthatha ukuzibophelela. Ukuphucula ukwaneliseka kwabathengi, inkonzo yabathengi, ukusondela kwintsebenzo yexesha elide kunye nokuphumelela kunye nomthengi.
I-HOUD (NBC) ekhokelela kulindelo lwabathengi kulwakhiwo lweemveliso kunye nokuphuculwa, qinisekisa ukuba isicelo somthengi sinokuphendula ngexesha, ngokukhawuleza ukondle iimfuno zabathengi, ukwenza ixabiso elingaphezulu kumthengi.
Kukho unxibelelwano olusesikweni nolungekho sesikweni kwiHOUD (NBC). Umqeshwa angabonisa isikhalazo sakhe okanye acebise ngqo kumphathi wakhe okanye kubaphathi abaphezulu. Ibhokisi yeziphakamiso ibekwe kwilizwi lokuqokelela kubasebenzi kuwo onke amanqanaba.
Ingqwalaselo yahlawulwa kwezomthetho, imfundo ethembekileyo neyokuziphatha. Khusela ilungelo lakho lokushicilela kwaye uhloniphe amanye amalungelo obunini. Ukwakha inkqubo yokulwa urhwaphilizo esebenzayo neselubala.
I-HOUD (NBC) ilumkile kuqokelelo lobuchwephesha kunye nokukhuselwa kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Utyalomali lwe-R & D aluzange lube ngaphantsi kwe-15% yentengiso yonyaka, bathathe inxaxheba ekwenzeni umgangatho wamazwe aphesheya. Hlonipha ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, ngesimo esivulekileyo, esinobuhlobo, ukuthobela kunye nokusebenzisa imigaqo yelizwe yokuthengiswa kwepropathi,
Ngothethathethwano, ilayisensi enqamlezileyo, intsebenziswano njl.njl ukusombulula ingxaki yepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Ngeli xesha malunga nomthetho wokophula umthetho, i-NBC iya kuxhomekeka kwingalo yomthetho ukuzikhusela.
I-HOUD (NBC) ithatha "umgaqo-nkqubo wokuqala wokhuseleko, ugxile kukhuseleko", ngokuphunyezwa koqeqesho kwezempilo nokhuseleko emsebenzini, ubeke imithetho yolawulo kunye nendlela yokusebenza ukuphucula ukhuseleko kwimveliso kunye neengozi.
I-HOUD (NBC) ligqwetha lenzululwazi kunye netekhnoloji, ukulima iitalente, ukuphucula ingqesho. Ukusebenza kwintlalontle yoluntu, ukubuyela koluntu, igalelo lommandla wokwenza ishishini elinoxanduva kunye nabemi.